အရေးပေါ်. (Useful.Apk) - Min Oaker
Application အရေးပေါ်. (Useful.Apk)
by မင်းခန့် (Second-E) ဘီလူးကျွန်းသားလေး on 8:26 PM in Application
ကိုကိုမမ ဦးဦးဒေါ်ဒေါ်များ မင်္ဂလာပါလို့ သား Min Oke Kar က နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ခင်ဗျာ..........
သားအခုတင်ပေးမယ့် Apk လေးကတော့ အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ တင်ပေးတာပါ ဘာလဲဆိုတော့ အရေးပေါ် ဆိုတဲ့ Apk လေးပါ သိတဲ့သူလည်း ရှိသလိုမသိတဲ့ လူလည်းရှိမှာပါ
သူက အရေးကြီးတဲ့အချိန်၊ အလျှင်လိုနေရတဲ့ အချိန်မှာတွေဆိုရင်တော့ 199 ကို ခေါ်ဖို့ (1) Click လေးပါပဲ။ နှစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ့်လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ်၊ စတဲ့ ထည့်သွင်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေက 199 ရာက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကဲအောက်က Screen Shot တွေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါနော်..... ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ (905 ) KB သာသာလေးရယ်ပါ...... Virsion (1.1) နဲ့ အထက်မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.................
By မင်းခန့် (Second-E) ဘီလူးကျွန်းသားလေး at 8:26 PM